Fanehoana kolontsaina betsileo :: Haseho etsy Ankorondrano ireo sary amin’ny kafe • AoRaha
Fanehoana kolontsaina betsileo Haseho etsy Ankorondrano ireo sary amin’ny kafe
Hafa kely. Horaiketina an-tsary amin’ny alalan’ny kafe ny tantara sy ny kolontsaina Betsileo. Hanome endrika vaovao sy tena mampiavaka ireo mponina any Fianarantsoa no tena antony hanoloran’i Tefy Khaita, mpamorona tantara an-tsary, an’ity fampirantiana « Betsileo au café » ity, amin’ny 21 hatramin’ny fiafaran’ny volana aogositra ho avy izao, etsy amin’ny Chicken Art, Ankorondrano.
Tsy zoviana amin’ny mpankafy sary intsony ny fitiavan’ity mpanakanto ity mikarokaroka sy mampivady ny kantony amin’ny maha Betsileo azy. Entiny hamakivaky an’i Fianarantsoa ireo mpitia sary mandritra an’io fampirantiana ataony io. Alaina amin’ny kafe ny loko ampiasain’ity mpanakanto ity handrafetana ny tantara tiany ampitaina noho ny toerana goavana ananan’ny kafe, amin’ny andavanandron’ny Betsileo.
Tao anatin’ny fikarohana sy andrakandrana no nahatonga an’i Tefy Khaita handoko amin’ny alalan’ny kafe, raha ny fanazavana azo. Samy hahazo toerana ao anatin’ny sary ataony avokoa, na ireo saha mitomandavana, ny ala, ny toeram-pambolena samihafa ary indrindra ireo mponina. Tia mifampizara amin’ny manodidina azy ity mpanao sary ity. Ny vokatr’ireo fihaonana nataony no havohitrany, amin’io fotoana io.
Biraon’ny Trano Koltoraly Malagasy